Gaas Oo Wariyaasha Puntland Qori Caaraddii Ku Haya Dhageyso/
Sunday May 24, 2015 - 10:28:22 in Wararka by Super Admin
Wariayasha ku dhaqan deegaanada uu ka taliyo mamaulka puntland ee cabdi-weli maxamed cali gaas madaxda u yahay ayaa sheegaya in ay caga julgleyn iyo hantadaad kala kulmaan ciidamada maamulka. Waxay sheegayaan maamulku in aanuu ogoleyn in xaqiiada la
Wariayasha ku dhaqan deegaanada uu ka taliyo mamaulka puntland ee cabdi-weli maxamed cali gaas madaxda u yahay ayaa sheegaya in ay caga julgleyn iyo hantadaad kala kulmaan ciidamada maamulka. Waxay sheegayaan maamulku in aanuu ogoleyn in xaqiiada la soo bandhigo.
Waxay hadlayeen kadib markii shalay laba wariye oo ka tirsan Idaacadda daljir ciidamada gaas qori caradii ku kaxeeyeen xaruntii ka shaqeynayeen ee garowe ku taal iyadoon loo sheegin wax loo haysto oo dembi ah.
Wariyasha ayaa lagu xiray saldhig ku yaal garowe waxaana arintaas camabareeyay madaxda laamaha idaacadda dal jir axmed tollman iyo madaxda urur suxufiyiinta puntland leeyihiin oo la yiraahdo feysal khaliif barre.